नेपालमा बर्षेनी क्यान्सरका रोगीहरु किन बढ्दै छन् ? | Nepali Radio Network radionrn.com नेपालमा बर्षेनी क्यान्सरका रोगीहरु किन बढ्दै छन् ? | Nepali Radio Network
नेपालमा बर्षेनी क्यान्सरका रोगीहरु किन बढ्दै छन् ?
२२ माघ २०७४, सोमबार ०७:१९
दिनेश न्यौपाने, काठमाण्डौ । विश्व क्यान्सर दिवस, “म सक्छु, हामी सक्छौ” भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि बिभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरी मनाएको छ । क्यान्सर रोगविरुद्ध सचेतना जगाउने उदेश्यले हरेक वर्ष फेब्रुअरी ४ मा ‘विश्व क्यान्सर दिवस’ मनाइएको हो । विश्वव्यापी रुपमा वढिरहेको यो रोग नेपालमा पनि जटिल समस्याको रुपमा देखा पर्दै गैरहेको छ ।
क्यान्सर रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका कार्यक्रम संचालन नगरेमा आगामी दिनमा यो रोग अझै भयावह हुने संकेत चिकित्सकले गरेका छन् । विश्वभर एक करोड ४० लाख क्यान्सर बिरामी रहेका र वर्षेनी ९० लाख मानिसको मृत्यु क्यान्सरकै कारण हुने गरेको जनाइन्छ । मुख्यतया धुम्रपान, सेवन र अखाद्य बस्तुमा मिसावटले पनि क्यान्सरको जोखिम बढेको चिकित्सक बताउछन् ।
नेपालीको औसत उमेर बढ्नु, जनचेतनाको कमी, शारिरिक व्यायामको कमी, धुवाँ धुलो लगायतका कारणले क्यान्सरको जोखिम बढ्दो छ । नेपालमा पनि बर्षेनी ३० देखि ४० हजार सम्म नयाँ क्यान्सर रोगी थपिने गरेका छन् भने वर्षेनी क्यान्सरकै कारण २० हजार व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल निर्देशक ऋषिकेष नारायण श्रेष्ठले बताए ।
बिश्वमा मानिसको मृत्यको कारकहरु मध्ये क्यान्सरको संक्रमण दोस्रोमा देखिएको छ । प्राय जसो अबिकशित मुलकहरुमा क्यान्सरको जोखिम छ । नेपालमा जस्तो मुलुकमा भने जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न नसक्नु नागरिकहरुले आफ्नो दैनिक जीवन यापन गरिरहदा, ख्यालै नगर्ने, गरेका कारण क्यान्सरको चुनौति थपिदै गएको छ ।
फोक्सो पाठेघर स्तन र छालाको क्यान्सर आदि प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । क्यान्सर बिरामीलाई बचाउनका लागी क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु र व्यापक रुपमा क्यान्सर परीक्षण शिविरको टड्कारो आवश्यता रहेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिबीको रेखामुनि रहेका क्यान्सरका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, दायरामा परे÷नपरेको पहिचान नै राम्ररी हुन नसकेको कारण बिरामीले यस्तो सुविधा अहिलेसम्म पाएको देखिँदैन । जेटमा मुटु, मृर्गौला, क्यान्सरलगायत जीवनलाई उच्च जोखिममा पार्ने आठ वटा रोगको निःशुल्क उपचार गर्न केहि रकम पनि छुट्याएको स्वास्थय मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।
त्यसैले अब क्यान्सर रोकथामका लागि स्वस्थ्यकर जीवनशैली अपनाउने, सूर्तिजन्य पदार्थ र जाँडरक्सीको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्ने, अस्वस्थ्यकर खानपिनको बानी व्यवहारमा सुधारको खाँचो छ ।